Vadiwa vadzidzi, pane mazana ezvidzidzo zveGerman pane yedu saiti. Pamusoro pezvikumbiro zvako, isu takakamura izvi zvidzidzo zvevadzidzi vepuraimari nesekondari uye tikazvikamura kuva makirasi. Isu takakamura zvidzidzo zvedu zveGerman zvakagadzirirwa zvinoenderana nedzidzo yenyika dzidzo yakashandiswa munyika medu yegumi neimwe yegumi neimwe uye yegumi nembiri vadzidzi vegiredhi uye zvakanyorwa pazasi.
Sezvaunoziva, zvidzidzo zveGerman zvakati rebei mumakadhi aya, kunyanya sezvo mamakisi gumi nemaviri ari kugadzirira bvunzo yekupinda kuyunivhesiti. Mune zvimwe zvikoro kudzokororwa kunoitwa uye mune zvimwe zvikoro zvidzidzo zvitsva zvinodzidziswa. Naizvozvo, runyorwa rwemakosi atakapa pazasi anogona kunge asiri kunyatsoenderana nezvidzidzo zvinodzidziswa muzvikoro. Naizvozvo, muchinyorwa chino, takaona zvakakodzera kupa 12th grade uye 11th grade pamwechete.
Pazasi pane runyorwa rwezvidzidzo zvedu zveGerman zvinoratidzwa kune 11th uye 12th giredhi vadzidzi mukati medu nyika. Iyo yeGerman unit runyorwa pazasi iri muhurongwa kubva pazviri nyore kusvika zvakaoma Zvisinei, kurongeka kwemisoro yacho kunogona kuve kwakasiyana mune mamwe mabhuku echiGerman uye mamwe mabhuku ekuwedzera.
Pamusoro pezvo, apo chidzidzo cheGerman chiri kudzidziswa, marongero ezvikamu anogona kusiyana maererano nezano redzidzo remudzidzisi anotora chidzidzo cheGerman.
Misoro inoratidzwa kune kazhinji mamakisi 11 ne12 muTurkey anosanganisira, asi haigone kugadzirisa mamwe mayuniti zvinoenderana nezvinodiwa nemudzidzisi wechiGerman, kana inogona kuwedzera kuwedzerwa sezvikamu zvakagadziriswa, mamwe mayunitsi anogona kubvumidzwa, kureva 11 kirasi kukirasi inotevera kana chimwe chikwata 9. Paunenge uri mukirasi inogona kunge yakagadziriswa. Nekudaro, misoro yakafukidzwa muzvidzidzo zveGerman mune 11th uye 12th mamakisi anotevera.
11th Giredhi uye 12th Giredhi Zvidzidzo zveGerman
ChiGerman Muviri Masangano
ChiGerman Ordinal Numeri
ChiGerman Trennbare Verben
ChiGerman Adjective Ratings
ChiGerman chirevo chekugadzirisa
Vadiwa vadzidzi, misoro yakafukidzwa muzvidzidzo zveGerman mune yegumi neimwe uye yegumi nembiri mamakisi kazhinji ari pamusoro. Tinokushuvirai mese kubudirira.
11th giredhi Zvidzidzo zveGerman11. kirasi german nyaya inotaura12th giredhi Zvidzidzo zveGerman12. kirasi german nyaya inotauraGerman 11. class presentation11th giredhi zvidzidzo muchiGermanGerman 12. class presentation12th giredhi zvidzidzo muchiGerman